पिसाब पोल्छ ? त्यसोभए यसो गर्नुस् – Health Post Nepal
पिसाब पोल्छ ? त्यसोभए यसो गर्नुस्
२०७८ कार्तिक ४ गते १६:०७
पिसाब गर्दा पोल्ने समस्या धेरै व्यक्तिलाई हुने समस्या हो। विशेष गरी महिलालाई यो समस्याले सताउँछ। कसैलाई त वर्षमा २-३ चोटी यो समस्याले सताउँछ। गर्भवती महिलालाई पनि यो समस्याले सताउँछ।
जनेन्द्रीयको भित्री भाग योनीमा इकोली नामक कीटाणुहरू रहन्छन्। सामान्य अवस्थामा यी कीटाणुहरूले शरीरलाई कुनै पनि हानी पुर्याउँदैन। तर, यी कीटाणुहरु योनीबाट मूत्रनलीमा पुगे भने समस्या सुरु हुन्छ। यस्तो बेलामा पिसाब गर्दा एकदम पोल्ने हुन्छ। छिनछिनमा पिसाब लागेजस्तो हुन्छ। तर, पिसाब गर्न जाँदा पिसाब आउँदैन।
धेरै जसो महिलाहरूले धेरै पानी वा झोल पदार्थ पिएमा धेरै चोटी शौचालय जानुपर्छ भनेर पानी पिउन डराउँछन्। यही डर नै कतिपय अवस्थामा रोगको कारण बन्छ। पिसाब पोल्नेबित्तिकै पानी पिउन सुरु गर्नुपर्छ। मूत्राशयमा पिसाब जम्मा भएपछि त्यसमा इकोली (एक प्रकारको व्याक्टेरिया) रहन्छ। यदि समयमा पिसाब गरिएन भने इकोलीको संख्या बढ्दै जान्छ। हरेक २० मिनेटमा इकोलीको संख्या दोब्बर हुन्छ। धेरैजसो महिलाहरू पानी बढी पियो भने धेरै पिसाब फेर्न जानुपर्ने र यसो गर्दा धेरै पटक पिसाब पोल्छ भनेर पेय पदार्थ कम पिउँछन्। यसले गर्दा झन् बढी समस्या पर्छ। यस्तो बेलाामा झन् पानी पिएर सकेसम्म इकोलीलाई बगाउनु पर्छ।
पिसाब पोलेको बेला जति पानी पियो उति छिटो पोल्ने समस्या हराउँछ। यस्तो बेलामा पिसाबको रंगमा ध्यान दिनुपर्छ। सेतो र सफा रंगको छ भने पानी पर्याप्त पुगेको छ। यदि पहेँलो र मैलो रंगको छ भने पानी अझैं पुगेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ।
धेरैजसो महिलाहरूले धेरै पानी वा झोल पदार्थ पिएमा धेरै चोटि शौचालय जानुपर्छ भनेर पानी पिउन डराउँछन्। यही डर नै कतिपय अवस्थामा रोगको कारण बन्छ।
यदि पिसाब पोल्नुको साथै यी अवस्था पनि देखापरे भने तुरुन्तै चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ। जस्तै पिसाबमा रगत देखा पर्नु, ढाड दुख्नु, ज्वरो आउनु, शरीर कामेको जस्तो हुने, वान्ता हुनु, वाकवाक लाग्नु।
हरेक पटक दिसा गरेपछि पानीले धुने भए पनि पिसाब गर्दा चाहीँ हामीले पानीले जनेन्द्रीय धुँदैनौं। त्यसैले हरेक पटक पिसाब गरेपछि जनेन्द्रीयको बाहिरी भाग पानीले सफा गर्नुपर्छ। दिसा धुँदा पनि मलद्वारबाट योनीतिर होइन, योनीबाट मलद्वारतिर गरेर सफा गर्नुपर्छ। तर सफाइको नाममा कुनै साबुनले धुनु पर्दैन।
केही डाक्टरहरुले यौनसम्पर्कपछि तुरुन्त शौचालय जाने र पिसाब फेर्ने सल्लाह दिन्छन्। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा पाइएअनुसार प्रजनन उमेरका र यौनसम्पर्क राख्ने महिलाहरुमा यो समस्या बढी देखिएको छ। तर केही साधारण नियम पालन गरेर यसबाट बच्न सकिन्छ। गर्मी याममा पानी बढी पिउनु उचित हुन्छ। सामान्यतः दिनको ८–१० गिलास पानी पिउनु पर्छ। बढी गर्मी र बढी पसिना निस्केको बेलामा केही बढी पानी पिउनु ठीक हुन्छ। पानी पिउन स्वादका लागि जस्तै: कागती–पानी, कागती–चिया, मोही आदि राख्न सकिन्छ।